Marzipan: incazelo kanye nokusungulwa. Marzipan e candy - kulokho ukuyenza?
Mhlawumbe, emhlabeni akunakwenzeka ukuthola umuntu okwakuyoba kahle qakala amaswidi. Ngakho sahlela ukuthi ucezu okuthile ngendlela esihlwabusayo ukuze zenze ukuba kunyuke umuzwa yesikhashana injabulo. Namuhla ngifuna ukusho amazwi ambalwa mayelana marzipan, izibiliboco okukhethekile. Uma usuke wazama ke okungenani kanye empilweni yakho, cishe ukukhumbula ukunambitheka esiyingqayizivele futhi befuna ukufunda okwengeziwe mayelana ngezithako zawo. Marzipan zingenziwa ekhaya, kuleso simo izinga lokugcina lomkhiqizo inzuzo.
Iqiniso lokuthi nut, okuyinto isisekelo ubumnandi, ngempela eqolo. Ngakho-ke, abakhiqizi bafuna ukufaka esikhundleni salo okunye, futhi ukuze ungeze amakhemikhali Iphunga. Izinga le ilahlekelwa, kodwa mkhiqizo ngenani ethengekayo wokuncintisana.
Yini sikubiza marzipan
manje Abaningi Uyakhumbula unamathisele ukuhlobisa amakhekhe, bushelelezi futhi shiny. Uqinisile, kungcono ngempela ngawo. Futhi iyini ngezithako zawo? Marzipan - lokhu confection, okuyinto Yenziwe esihle ngesisekelo alimondi kanye noshukela. marzipan Classic kuyinto mass plastic, ingasetshenziswa kungaba, phakathi kwezinye izinto, ukwakha imifanekiso kanye imihlobiso for amaqebelengwane. Isetshenziselwa njengoba yamathebhu futhi amaswidi.
Futhi lapho izwe beqala ukuzwa elula okunjalo futhi ngesikhathi esifanayo ubumnandi elicwengisiswe? Ukuze uphendule lo mbuzo, kumelwe futhi iphawule kwengoma. Marzipan Yenziwe alimondi, futhi kungakho nje kokukhululwa kwe-umkhiqizo kwakufanele aqale lapho isabelo sakhe. emazweni amaningana aseYurophu ukuba uphikise entendeni enkulu ekwakhekeni confectionery.
amasiko Old yokwenza marzipan amaswidi khona eJalimane nase-Austria, i-Netherlands and Italy. Kodwa edume kakhulu kubo akhiqizwa enyakatho yeJalimane. Futhi isikhathi eside ke avalelwe Ukwakheka esiyingqayizivele. Marzipan akuyona ngempela wakhulelwa njengenhlangano ubumnandi okukhethekile. Vele ufulawa alimondi yasetshenziselwa ngenxa yokungabi bikho noma ukungabi ingqikithi ufulawa kakolweni. Marzipan isinkwa kangangokuthi zaqala ukusetshenziswa futhi ezikhathini ezinhle, kodwa njengendlela dessert.
Kuyathakazelisa ukuthi kuze kube ngekhulu XVIII, umakhi marzipan wahlanganyela khekhe nje kuphela kodwa futhi bamakhemikhali. ngemva kwesikhathi eside kakhulu kuphela, leli khono is ngokuphelele sidluliselwe Confectioners. Futhi ngokushesha kakhulu, lo mkhiqizo isibe eqolo ngenxa ukwanda ushukela amanani nama-alimondi. Kodwa ngisho nanamuhla, lokhu ubumnandi lisahlonishwa kakhulu, kodwa manje thina ongakwazi ukulikhokhela. Ukwanda nokutholakala lesi sidlo kuphezulu kakhulu.
Tricks zokukhiqiza yesimanje
Kuyinto imfihlo ukuthi iningi imikhiqizo zakhiwe zokwenziwa analogue noma esikhundleni. Mina yayiphumula futhi marzipan. Ukwakheka kuzomele sifake alimondi kuphela, ushukela kanye rosewater. Futhi manje emashalofini, ngokuvamile ayinakho maqondana amaswidi edume.
Esikhundleni unamathisele alimondi ungaya zonke nuts, kodwa ngokuvamile kakhulu kuba namantongomane. Kodwa kaningi kakhulu ukwakheka esisitholayo kabhontshisi noma ubhontshisi, fillers ehlukahlukene yokufakelwa isithokela flavorings. Umfundi kungenzeka ukwazi ukuthi irekhodi endala cookbooks kuhlinzekelwe bezihlikihla on a grater alimondi esihle ushukela kanye ukugaya eside uyaca esigqulweni. Kuyinto lokhu kuzuza plasticity esiphezulu mass. Isikhathi ukwenziwa amaswidi Kwakudinga ngenxa wentengo okusezingeni eliphezulu.
Basuke kuchazwa yi-Eqinisweni lokho okwenza marzipan. Ukwakheka, okuyinto umenzi kumele akhombise ku iphakethe, futhi ukhombise ukuthi ukuthenga lo mkhiqizo. Uma ama-alimondi, umkhiqizo ilondoloza ngokugcwele zonke izakhiwo yalesi nut ewusizo. Futhi ocebile kakhulu amavithamini B kanye no-E, kanye nezinye Antioxidants. Kodwa micronutrients kakhulu. Nje nuts ambalwa ngosuku sizonikeza umzimba wakho ne phosphorus kanye potassium, magnesium kanye nabanye abaningi.
Ukwazi lokho nut ingxenye marzipan, uzobe azi kahle ukuthi uthola nge ukusetshenziswa njalo-ke. Ama-alimondi okukhiphayo isihlabathi izinso, normalizes pancreas, futhi uyazihlanza igazi. Kuyinto analgesic yemvelo, okuyinto anazo ngaphandle futhi isenzo anticonvulsive. Ukusetshenziswa kwalesi nut kubonakala somoya, ukucindezeleka nokuqwasha. Njengoba ubona, the marzipan kungcono kakhulu confectionery ezivamile.
Eqinisweni, lena akunandaba ngempela. Into esemqoka - ukwazi ukubunjwa amaswidi marzipan, futhi ungakwazi ukudlala Analogue egcwele. Uzodinga ukuthatha 150 amagremu of nati alimondi ukususa kubo kusuka kumasistimu asebenzayo amnyama. Ngenxa yalesi, abo uthele amanzi abilayo ngomzuzu, bese uma ngamanzi abandayo. Ngemva kwalokho, igobolondo iza off kalula, futhi nati kwabona badinga ukuze ome on a napkin. It uhlala ukuze ugaye alimondi a chips encane kakhulu itshe lokugaya noma blender.
Manje, kuze kube imvuthu okuholela ukwengeza amagremu 100 ushukela oluyimpuphu. Kungcono ukuthatha umkhakha kanye ekhaya akusebenzi ukugaya okuhle ngakho. Ukuze le ngxube is ungeze isipuni kagologo, amanzi noma ubisi, abanye abapheki khekhe ukunikela ukusetshenziswa amaprotheni ongahluziwe kusuka amaqanda izigwaca. Kule inhlama wayixova abushelelezi. Liquid kuwo kufanele kube ngokwanele ukwenza inhlama hhayi wanamathela izandla futhi etafuleni. Uma uketshezi liphansi kakhulu, inqubo iyaqala nomkhombe uwoyela ukuma alimondi, okungukuthi ngokuphelele akudingekile. Kule mass zingase zimiswe round candy, kulo ufake nut noma toffee, futhi chocolate kungenziwa wathela phezu.
Ingabe esitolo ayinakukuthenga izinga candy futhi kudingeka siqiniseke ukukwenza ngokwakho? Lutho neze. Petersburg kukhona esihle esitolo inthanethi Grondard. Marzipan, ogama Ukwakheka ngokuphelele elandela izindlela ezindala, ngempela, ukuthi likhiqizwa futhi zahlanganiswa lapha indlela oda, futhi okusemgqeni imodi.
Phakathi izakhamuzi inhlokodolobha enyakatho, lokhu esitolo kuthandwa kakhulu, njengoba ikuvumela ukuba wenze isipho ezijabulisayo, ngamunye ehlotshisiwe ozakwabo, umkhaya nabangane.
Popular Ritter Ezemidlalo
Akubalulekile oda esitolo online, njengoba bayidayise zonke esitolo. Indlela yemvelo kuvela "Ritter Ezemidlalo" "MARZIPAN". Ukwakheka enhle kodwa marzipan iqukethe bengekho ngaphezu kwama-16%. Zonke ukuphumula - kungcono ushukela, ukhokho, emulsifier futhi isiraphu. Ngakho-ke, uma icebo lakho ukuze ujabulele isipho, iresiphi alimondi, kutuswa ukuba uthole okunye okukhethwa kukho. Ikakhulukazi, ungakwazi kahle production ezifuywayo yalezi amaswidi, inzuzo akunzima kakhulu. Kulokhu, niyokwazi ukuthi namuhla bakhonza njengendlela dessert.
Myeloma - Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Contact lens Biomedics 55 Evolution. Ukucaciswa, yokusetshenziswa, ngempela
Blissful ukushisa kwehlobo, noma kanjani ukubaleka ukushisa in the efulethini?
The enhle California banana inyoka?
Ubani otholile umonakalo we-radioactivity futhi kwenzeke kanjani lokhu?